Trafikana tanalahy, androngo: Sinoa roa lahy voasambotra teny Ivato | NewsMada
Par Taratra sur 18/02/2019
Tsy ny sokatra ihany. Lasibatry ny trafika koa ireo karazam-biby mandady toy ny tanalahy sy ny androngo. Teratany sinoa roa lahy no voaambotra teny Ivato, ny faran’ny herinandro teo, raha nikasa hanondrana an-tsokosoko izany ho any ivelany.
Tratra teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny Sinoa roa lahy, ny asabotsy teo, saika hanondrana an-tsokosoko tanalahy (calumma pasonii), lezard (phelsuma quadriocellata) ary mille pattes (aphistogoniulus). Voalaza fa nahatratra ireto Sinoa ireto ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra.
“Notanana ary atao famotorana ireo teratany sinoa roa tratra ireo ary tsy maintsy homena ny sazy mifandraika amin’ny fandikan-dalàna nataony, araka ny nambaran’ny minisitra tompon’andraikitra. Nanambara ihany koa andriamatoa minisitra fa tsy maintsy hohamafisina ny fanaraha-maso eny amin’ny seranam-piaramanidina tsy hiverimberenan’izao tranga izao.
Ity trangana fanondranana an-tsokosoko harena voajanahary sy ny biby ity izay matetika mitranga eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato.
Teratany vahiny mazàna no tratra amin’izany ka tena tafiditra amin’ny fikasana hanondrana an-tsokosoko biby tahaka izao ny Sinoa, indrindra fa ny sokatra. Vao ny 18 janoary lasa teo ny nahatrarana ilay Sinoa atidoha amin’ny fanondranana sokatra. Zana-tsokatra miisa 113 ny saika havoakan’io Sinoa io, saingy sarona.
Manao antso hatrany ny tompon’andraikitra avy amin’ny minisitera, na ny amin’ny ladoany koa aza, hanome vaovao rehefa misy ny mampiahiahy amin’ny tranga tahaka itony. Ankoatra ny fisavana sy ny fisian’ny fitaovana hahafahana mitily izany mantsy, anisan’ny zava-dehibe ny fanomezam-baovao. Mety hisy ny mpiray tsikombakomba, sns, matoa sahy mbola minia mitondra ireo biby ireo hivoaka eny Ivato ihany ireo olon-dratsy.
Eo ihany koa ny mety mahamaivana ny sazy mifanaraka amin’ny karazana fandikan-dalàna tahaka izao ka mampiverimberina ny fanondranana an-tsokosoko. Ny fisian’ny tolotra sy tinady amin’ireo harena voajanahary ireo, izay ilam-pandinihana ihany koa ny fisorohana azy.